मुम्बईसँग खेल्दै दिल्ली, सन्दीपको संभावना न्यून ! | Hamro Khelkud
मुम्बईसँग खेल्दै दिल्ली, सन्दीपको संभावना न्यून !
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को ३४ औं खेलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका ८:१५ देखी दिल्लीको घरेलु मैदान फिरोज शाह कोटलामा सुरु हुनेछ । दुवै टोली छैटौं जितको खोजिमा छन् । यसअघि मुम्बईको घरेलु मैदानमा दिल्ली ३७ रनले विजयी भएको थियो । दिल्ली ८ खेलमा ५ मा जित र ३ मा हारका साथ १० अंक जोड्दै अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । समान खेलमा ५ मा जित र ३ मा हारका साथ नेट रन रेटमा दिल्ली भन्दा पछि परेको मुम्बई तेस्रो स्थानमा छ ।
आजको खेलमा मुम्बई विजयी भए दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ । दोस्रो स्थानमा कायमै रहन दिल्लीलाई आजको खेल जित्नुपर्ने हुन्छ । दिल्ली श्रेएस ऐर र मुम्बई रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने छ ।
फिरोज शाह कोटला स्पिनरका लागि उपयोगी मैदान हो । तर पनि नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आजको खेलमा मौका पाउने संभावना निकै कम देखिन्छ ।
सन्दीपको स्थानमा मौका पाएका किमो पलले हैदरावादविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । उक्त खेलमा म्यान अफ द म्याच नै चुनिएका उनले ३ ओभरमा १७ रन खर्चेर शीर्ष क्रममका ३ ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेका थिए । पलले तल्लोक्रममा ब्याटिङ गर्ने क्षमता पनि राख्ने हुँदा दिल्लीले आज उनलाई नै निरन्तरता दिने प्रबल सम्भावना छ ।
दिल्लीले एक स्पिनर खेलाउने छ । जसमा अमित मिश्रा खेल्ने निश्चित जस्तै छ । हैदरावादविरुद्ध उनले विकेट लिन नसकेपनि ३ ओभरमा मात्र १३ रन खर्चेका थिए । त्यस्तै खेलाडी परिवर्तन गरिरहँदा टोलीको प्रर्दशनमा पनि असर पुग्ने हुँदा दिल्लीले आजको खेलमा कुनै खेलाडी परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिंदैन ।
जारी आईपीएलमा सन्दीपले ४ खेलमा ५ विकेट लिएका छन् । बेंगलोरसँगको खेलमा ४ ओभरमा ४६ रन खर्चेर १ विकेट लिएपछि दिल्लीले पछिल्ला दुई खेल कोलकता नाइट राइडर्स र हैदरावादसँगको खेलमा बेन्चमा राखेको थियो । सन्दीप आईपीएलको इमर्जिङ प्लेयर अवार्डको मनोनयनमा पर्नुको साथै हालसम्म भोटिङमा अग्रता लिएका छन् ।